China M-1 otomatiki Cat Litter Bhokisi Kugadzira uye Fekitori | Kusetsa
M-1 Kuzvichenesa Katsi Litter Bhokisi isarudzo yakanaka kuvabereki vekatsi vakabatikana nebasa nekuti vaisakwanisa kutarisira katsi yavo yakanaka pamwe nekutarisirwa. M-1 Cat Chimbuzi chakagadzirwa nezvinhu zvakachengeteka uye zvakatipoteredza zvine otomatiki kushanda basa uye deodorizing basa. Panguva ino, zvichave zviri nyore kwazvo kuchenesa tsvina yekatsi.
Low ruzha:Akangwara uye tekinoroji nzvimbo kapisi dhizaini, simba-rakanyarara-simba uye yakaderera simba rekushandisa. Rakafuridzirwa neiyo space capsule, avhareji inomhanya ruzha yakaderera pane 60dB, Dzivirira kunzwa kwekatsi zvakanyanya, inogona kurega katsi inonyara kukurumidza kuchinjika.
Kushanda kwekuchengetedza:Iyo aeronautical katatu kudzivirira system inovavarira kuchengetedza kuchengetedzwa kwechipfuyo. Anti-kupidigiza dhizaini zvinobudirira zvinodzivirira tsaona senge kupidigura uye rollover. Ichamira ichimhanya nekukasira kana ichiona muviri wekunze, inogona kunyatso kuona huremu hwemakatsi akasiyana, haimhanye kusvika masekonzi matanhatu mushure mekusiya kati, kudzivirira kutyisa kati.
Nyore kushandisa:Iyo LCD skrini inoratidza inowirirana dhata uye mashandiro makiyi anobatsira kupedzisa mashandiro nekukurumidza. Iyo yepamusoro-tekinoroji LCD inoratidzira nzvimbo inoita kuti mashandiro emabasa mabhatani ave nyore, uye iyo petuhuremu dhata inoratidzwa mune chaiyo nguva.
Sunungura maoko ako:Yakakura kabhini nzvimbo dhizaini, inogona kunge iine bhegi rese re6L katsi marara, sutu yekati dzakawanda mukamuri imwe uye katsi hombe. Zviri nyore kukatanura uye kusuka, zvinokurudzirwa kuchenesa yekuzvichenesa-wega kabhini pamwedzi nekutsvaira uye kupukuta.
Hapana hwema:Quadruple deodorization maitiro anochengeta katsi nyowani zuva nezuva. Chengetera inoreruka deodorization nzvimbo, hapana kudikanwa kune yakasarudzika deodorizing zvishongedzo, zvakajairika sengezi marasha mabhegi uye aromatherapy mabhegi anogona kuiswa mukati.
Tsvina Bin Kugona
Cat marara kugona
Kumira 1W, Kumhanya 6W
Pashure: E Smart otomatiki Anopa Kitsi uye Imbwa
Zvadaro: M-2 otomatiki Cat Litter Bhokisi